Izindaba - Imboni ye-Global Fiberglass
Imakethe ye-fiberglass emhlabeni wonke kulindeleke ukuthi ikhule ngama-US $ 7 Billion, aqhutshwa ukukhula okuhlanganisiwe kuka-5. 9%. I-Glass Wool, enye yezingxenye ezihlaziyiwe nezilinganiselwe kulolu cwaningo, ibonisa amandla okukhula abe ngaphezu kwe-6.
Februwari 04, 2020 13: 58 ET | Umthombo: ReportLinker
ENew York, Feb. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - I-Reportlinker.com imemezela ukukhishwa kombiko “Global Fiberglass Industry” - https://www.reportlinker.com/p05798567/?utm_source=GNW
8%. Ukuguquguquka kwamandla okuxhasa lokhu kukhula kwenza kubaluleke kakhulu kumabhizinisi akulesi sikhala ukuthi azi ngokuqhubekayo ngokushintsha kwemakethe. Bezimisele ukufinyelela ngaphezu kuka-US $ 6.2 Billion ngonyaka ka-2025, i-Glass Wool izoletha inzuzo enempilo engeza
Umfutho obalulekile ekukhuleni komhlaba.
- Imele umhlaba othuthukile, i-United States izogcina umfutho wokukhula ongu-5%. Ngaphakathi kweYurophu, eqhubeka nokuhlala iyinto ebalulekile emnothweni womhlaba, iGerman izokwengeza ngaphezulu kuka-US $ 250 Million kusayizi wesifunda futhi
clout eminyakeni emihlanu kuya kwengu-6 ezayo. Isilinganiso esilinganiselwe esingaphezu kuka- $ 210.9 Million esifunekayo esifundeni sizoqhamuka ezimakethe ze-Rest of Europe. EJapan, i-Glass Wool izofinyelela usayizi wemakethe we-US $ 241.3 Million ekupheleni kwesikhathi sokuhlaziya. Njengomnotho wesibili ngobukhulu emhlabeni kanye noshintsho lomdlalo olusha ezimakethe zomhlaba, iChina ikhombisa amandla okukhula ngo-8.8% eminyakeni embalwa ezayo bese ifaka cishe ama-US $ 1.9 Billion ngokuya ngamathuba okubhekana nokukhethwa ngu
abafisa amabhizinisi nabaholi babo abanobuhlakani. Kwethulwe ngemidwebo ecebile ngokubonakalayo yilezi kanye neminye imininingwane eminingi edingekayo yokwazi ebalulekile ekuqinisekiseni ikhwalithi yezinqumo zamasu, kungaba ukungena ezimakethe ezintsha noma ukwabiwa kwezinsizakusebenza
ngaphakathi kwephothifoliyo. Izici eziningana ze-macroeconomic namandla emakethe yangaphakathi azokwakha ukukhula nokuthuthuka kwamaphethini okufuna emazweni asafufusa e-Asia-Pacific, Latin America nase Middle East. Yonke imibono yocwaningo eyethulwe yile
ngokususelwa ekuzibandakanyeni okuqinisekisiwe okuvela kubathonya emakethe, imibono yabo edlula zonke ezinye izindlela zokucwaninga.